१६ जना डाक्टरको दरबन्दी, एकजना मात्रै विशेषज्ञ उपलब्ध !
मंगलबारे, इलाम, १७ मंसिर – १६ जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पताल इलाममा एकजना मात्र विशेषज्ञ उपलब्ध हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
मंसिर १७, २०७४ मा प्रकाशित
समानुपातिकको ८६ लाख भोट गन्दा एमालेकै अग्रता: कुन पार्टीले कति मत ल्याए ?
कृषि विकास बैंकको जागिरका लागि लिखितमा क—कसको निस्कियो नाम ?
ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, चीनसमर्थक नेपाली प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच आर्थिक साझेदारी बढाउँछन्
काठमाडौंमा सडक बत्तिका लागि राखिएको सोलारको यस्तो हालत